HOME | EXCELLENT FORTUNE DEVELOPMENT GROUP
စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် သန့်ရှင်းသော၊ အလေအလွင့် အနည်းဆုံးဖြစ်မည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သည့် တတ်ကျွမ်းပညာရှင် ဖြစ်ရမည်။
ကြယ်စုများ အာကာသတွင် ထွန်းလင်းဘိသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့များအား ပိုမိုအင်အားကြီးမားစေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲသွားမည်။ လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျှော့ချခြင်း၊ မိမိတို့၏ စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအား သန့်ရှင်းစေမည်၊ ကောင်းကင်ကြီးအား ရှင်းလင်းကြည်လင်နေစေမည်။ EFD စီးပွားရေးလ...
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းပူနွေးလာမှုကိုလျှော့ချပြီး စိမ်းလန်းသော ကမ္ဘာမြေအား ထိန်းသိမ်းမွေးမြူရမည်။
EFD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစု၏ ရေရှည်စီမံကိန်းတွင် ကမ္ဘာတ၀န်းပူနွေးလာမှုကို လျှော့ချဖြေရှင်းနိုင်ရန် သစ်တောသစ်များ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း ကြိုးပမ်းမှုတို့ပါဝင်သည်။ သန်းပေါင်း ၅၀၀ ရှိသည့် အစိမ်းရောင်သက်ရှိ အပင်များသည် ကမ္ဘာမြေမှ အပူကို စုပ်ယူပြီး၎င်းအား လက်ဆတ်သန့်ရှင်းသောလေထုကို ထုတ်ပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။...
လူငယ်လူရွယ် ပါရမီရှင်များအား မြေတောင်မြှောက်ပေးခြင်းသည် အနာဂါတ်အတွက် ပုံဖေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
EFD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုသည် ပြည်သူလူထု၏ ပညာရေးစနစ်တွင် လက်ကမ်းကူညီမှုများ ပေးအပ်လျှက် ရှိပါသည်။ ကျောင်းသားများအား စာအုပ်များ ဆုချခြင်း၊ စီးပွားရေးချို့တဲ့သော ကျောင်းသားများအား ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများပေးအပ်ခြင်း စသည်တို့အားစဉ်ဆက်မပြတ် ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။ ပညာရေးအသိပညာဖြင့် ကလေးငယ်တို့၏ အနာဂါတ်...
အရှေ့တိုင်း၏ Jade Culture နှင့် ၀ယ်သူတို့တပ်မက်မှုအား ယနေ့ခေတ်ထိ ဆက်လက်ထွန်းကားရန် ကြံဆခြင်း
EFD စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုသည် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့် သယံဇာတသတ္တုများကို ရွေးချယ်အခြေခံထားသော Processing Chain စနစ်တည်ဆောက်ကာ မိမိတို့နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် Brand Image ကိုဖေါ်ဆောင်သွားပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုးတက်သော စီမံခန့်ခွဲရေးရာ ပညာနှင့် အတွေးခေါ်သစ်များဖြင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် Quality ထိန...
EXCELLENT FORTUNE DEVELOPMENT
No.5(A), PYAY ROAD , WARD (10), HLAING TOWNSHIP,
TEL:(0095-1) 507496, 507497. FAX: (0095-1) 535768.
© Copyright 2019 EFD Group.com. All Rights Reserved. Site by Zino Tech.